Puntland oo ciidamada badda u dirtay deegaanada xeebaha si ay ula dagaalamaan burcadbadeeda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo ciidamada badda u dirtay deegaanada xeebaha si ay ula dagaalamaan burcadbadeeda
Puntland oo ciidamada badda u dirtay deegaanada xeebaha si ay ula dagaalamaan burcadbadeeda
March 28, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Puntland oo ciidamada badda u dirtay deegaanada xeebaha si ay ula dagaalamaan burcadbadeeda. [Sawirka: Archive]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Puntland ayaa qaybo katirsan ciidamada badda u dirtay deegaanada xeebaha ee Puntland si ay uga hortagaan ficilada burcadbadeeda, sida uu sheegay sarkaal.
Mowliid Xasan, oo ah sarkaal katirsan ciidamada badda Puntland ee PMPF ayaa khadka taleefoonka ugu sheegay warsidaha Puntland Mirror in dowladda ay ciidamo katirsan PMPF u dirtay xeebaha Puntland.
“Waxaanu deegaanada xeebaha u dirnay guutooyin katirsan PMPF si ay u burburiyaan burcada kuwaasoo isku dayaya in ay qaadaan weeraro lid ku ah maraakiibta ganacsi ee gooshaysa halkaas.” Ayuu yiri Mowliid.
Dirida ciidamada ayaa timid labo asbuuc kadib markii burcadbadeeda Soomaaliya ay qaadeen weerarkoodii ugu horeeyay oo ka dhan ah maraakiibta ganacsi ee maraya xeebaha Puntland intii lagu guda jiray shanti sanno ee lasoo dhaafay.
June 25, 2017 Ammaanka Puntland oo la adkeeyay, walaac laga muujiyay hanaanka amni sugida
March 24, 2017 Kooxo burcadbadeed looga shaki qabo oo xeebta degmada Eyl ku afduubtay dooni yar si ugu ugaarsadaan maraakiibta ganacsi ee gooshaysa xeebaha Badweynta Hindiya
Puntland sent maritime forces to coastal areas to battle pirates
Ciidamada Ammaanka Puntland oo madaafiic ah ku gaaracay meelaha ay ku dhuumanayaan Al-Shabaab ee kuyaala gudaha Buuraha Galgala
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Ammaanka Puntland ee (PSF) ayaa dhowr madaafiic ah ku gaaracay shalay oo Isniin ahayd meelaha ay ku dhuumanayaan Al-Shabaab ee kuyaala gudaha Buuraha Galgala, sida PSF ay ku sheegeen qoraal kooban oo [...]
Baydhabo-(Puntland Mirror) Shirka maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah ka faurmay magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Shirka ayaa waxaa ka qeybgalay madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hir-shabelle iyo Koonfur Galbeed oo martigeliye [...]